Akpaghị aka Building Nke gị fọdụrụ API, Admin Panel, na Postman Documentation | Martech Zone
Otu ụzọ dị ukwuu iji nyochaa ngwa ọ bụla dị na ntanetị bụ ikewapụ njirimara onye ọrụ gị na ntanetị data site na iji interface Programming Ngwa (API). Ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ na mmepe, ihe API bu echiche di mfe. Dị nnọọ ka ị na-abanye ma jiri ngwa weebụ site na ihe nchọgharị na usoro nke Http arịrịọ, ngwa gị nwere ike ime otu ihe ahụ site na REST API na mmemme.
Ka ọtụtụ mmadụ na-abanye na mmemme, ha na-eme mmemme ihu igwe ọrụ yana mekọrịta data ha ozugbo. Nke ahụ dị mma ma ọ bụrụ na ọ bụ obere ngwa ma ị hụghị mgbe ọ bụla ịgbanwe ọrụ onye ọrụ, nchekwa data, ma ọ bụ tinye ngwa ahụ. Mana… mgbe ikwesiri ime nke ọ bụla dị n'elu, ugbu a ekwesiri imelite ngbako gị siri ike n 'etiti njedebe gị na nchekwa data gị.
Emepe emepe API n'etiti gị ihu njedebe na azu azu na-enye akwa nke nnwere onwe n’etiti ihe ahụ na-enyere gị aka ịkwalite ma na-ebuwanye ikpo okwu gị. Mgbe anyị wuru anyị Ngwaọrụ IP na-ekpo ọkụ na nso nso a, anyị mepụtara API ma webata ndị ọzọ… site na email ọcha, na nyocha ihe nkesa ozi, na ntinye ngwa, site na nhazi ịkwụ ụgwọ. Ngwa a bụ mashup nke ọtụtụ ọrụ na nyiwe. Site na ime ụlọ API, ọ tọhapụrụ ndị mmepe anyị ka ha wee nwee ike ịga n’ihu yana mee ka iwulite ihe owuwu anyị.
Mepụta API na-enyere gị aka ịgbasa onyinye gị site na ịbụ naanị ikpo okwu na njirimara onye ọrụ yana ịbụ ọrụ nke ndị ọzọ nwere ike ijikọ ma jiri ya rụọ ọrụ. Dika ulo oru choro igbanwe site na igwe, API bu ihe di nkpa. Dị ka ikpo okwu, inwe ụlọ ọrụ ndị ejikọtara ọnụ na API gị dịkwa oke nrapara… ozugbo ha gbakọtara, ha anaghị achọ ịhapụ ebe ọ bụ na enwere ọnụ ahịa ịhazigharị na usoro ọhụrụ ha.
Etu ị ga - esi wuo API gị na akpaghị aka
Automator wuru usoro nke ngwa ahia di oke onu ahia iji kwado ulo nke API gi. Ọ bụrụ na ị na-eji usoro dị iche iche nzuzo wee mezie nchekwa data gị nke ọma, ha na-enye ngwaọrụ ga-agụ ọrụ gị na nchekwa data gị wee wuo API ị chọrọ iji kwado ngwa gị. Ngwaọrụ ha nwekwara ike ịgụnye ịmepụta Postman Docs, nyocha, na ọbụlagodi nchịkwa. Nke a bụ ndepụta nke ngwaọrụ ha:
Automatic PHP REST API Generator + Postman Docs from MySQL Database With JWT Token Nyocha - A na - eji ngwa ọrụ ọgụgụ isi ahazi nhọrọ ndị a gbanwere na njedebe ọ bụla nke emepụtara REST API.
Automatic Responsive Admin Panel Generator + Ikike Management si MySQL database - Site ikike management ka media management oké atụmatụ akwado.
PostgreSQL ka REST API Generator Na nyocha JWT Token - PHP + Postman - Mepụta ọkachamara na-akpaghị aka iji REST API site na PostgreSQL Database Na Document Postman na Nyocha JWT. Dị njikere iji bulite faịlụ na ngosi Firebase.
ReactJS Admin Panel Generator MaterialUI Na PHP REST API Generator Site MySQL + JWT Auth + Postman - Ejiri igwe teknụzụ websaịtị kachasị ewu ewu, ReactJS App Generator With PHP CRUD REST API Generator bụ ngwọta dị ike na kensinammuo iji mepụta ReactJS Ngwa site na MySQL.
NodeJS REST API + ReactJS Admin Panel Generator si MySQL + JWT + Postman JSON - Ejiri ya na teknụzụ webendị kachasị ewu ewu, ReactJS App Generator With NodeJS CRUD REST API Generator bụ ngwọta dị ike na kensinammuo iji mepụta ReactJS Ngwa site na MySQL.
MySQL ka Dot Net Core Automatic REST API Generator + JWT Auth + Swagger + Postman - Na-akpaghị aka Mepụta .NET isi ọkachamara dị njikere iji REST API site na MySQL Database Na Postman Docs, Swagger na JWT Nyocha, Nkwado Ntugharị, Ntọala Ntọala,
MS SQL ka. Net Net Ezumike API Generator Na JWT Auth + Swagger + Postman - na-akpaghị aka Mepụta .NET Core ọkachamara dị njikere iji REST API site na MS SQL Database & Usoro echekwara na Postman Docs, Swagger na JWT Nyocha, Nkwado Ntinye, Ntọala Ntọala, wdg.
NodeJS REST API Generator si MySQL + Postman Json + JWT Auth - Windows - Mepụta ọkachamara na-akpaghị aka iji jiri REST API site na MySQL Database Na Postman Docs na nyocha JWT
Zụta ugbu a Zụta ugbu a (MacOS)
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta m na isiokwu a maka ihe niile Akpaaka ngwaahịa.
Tags: NETnchịkwa nchịkwaAPInyocha apiapi generatorNyochantụpọ netjsonjwtjwt tokenihe onwunweMySQLMyysql nchịkwa nchịkwa generatornodejsphp ezumike apipoestgresqlpostmanpostman jsonmmeghachi omumeezumike api generatorswaggerwindows